रहरकाे दाल र चना निकै गुणकारी, यसकाे फाइदा जानेर अचम्मित पर्नु हुनेछ - Mero Khabar Nepal
दालमा रहर उत्तम मानिन्छ । दिनहुँ उपयोग गरिने रहर दाल रातो र सेतो गरी दुई प्रकारको हुन्छ । रहर दालमा खनिज, कार्बोहाइड्रेट, आइरन, क्याल्सियम आदि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसमा २२ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ । रहरको दाल बाथ, पित्त र कफ अर्थात् त्रिदोषनाशक हुने भएकोले सबैका लागि अनुकूल मानिन्छ ।
आयुर्वेदका अनुसार रहर रुखो, शीतल, हल्का, बाथकारक, कफ–पित्त र रगतको दोषलाई समाप्त पार्ने हुन्छ । पच्न सजिलो र शौच रोक्ने गुणसमेत हुन्छ । यो वायु उत्पादक हुन्छ । यसले शारीरिक अंगलाई सुन्दर बनाउँछ ।
रहर रगत, कफ र रगतसम्बन्धी विकार हटाउन उपयोगी मानिन्छ । रातो रहर हल्का, तीक्ष्ण र न्यानो मानिन्छ । यसले भोकसमेत बढाउँछ । रहरले कफ, विष, रगतको खराबी, लुतो, कुष्ठ र पेटमा भएको कीरा हटाउँछ । यो दाल पाचकसमेत हो । धेरै सजिलै पच्ने भएकोले यो दाल बिरामीलाई समेत दिइन्छ । पाइल्स, ज्वरोमा यो दालको उपयोग लाभकारी मानिन्छ ।
अर्कातिर, चना शरीरमा तागत उत्पन्न गर्ने, भोजनमा रुचि पैदा गर्ने मानिन्छ । आयुर्वेदका अनुसार यो न्यानो प्रकृतिको हुन्छ । चनाले शरीरलाइ तरोताजा राख्ने गर्छ । रगतमा जोस उत्पन्न गर्छ ।
यो कलेजोका लागि समेत लाभदायक मानिन्छ । यसले रगत सफा गर्छ, धातु बढाउँछ र आवाज सफा पार्छ । रगतसम्बन्धी विकार हटाउन लाभदायक मानिन्छ । यसले पिसाब खोल्छ ।
चना मुख्यत: किशोर र शारीरिक मिहिनेत गर्नेहरूका लागि पौष्टिक खाजा हो । चना भिजाएर वा अंकुरित गरी नियमित बिहान सेवनले शरीर स्फूर्तिवान् र शक्तिशाली हुन्छ । अंकुरित चना खानुका धेरै फाइदा छन् ।
अंकुरित चनाले धातुलाई पुष्ट, मांसपेशीलाई सुदृढ र शरीरलाई बज्रजस्तै कठोर बनाउने प्राचीन मान्यता छ । यसको सेवन छालाको रोगमा समेत लाभदायक मानिन्छ । अंकुरित चनाको सेवनले फोक्सो बलियो बनाउने मान्यतासमेत छ । कब्जियतको समस्या भएकाहरूको लागि अंकुरित चना राम्रो मानिन्छ ।
भिटामिन ‘सी’ को मात्रा बढी हुने भएकाले चनाले तौल बढाउँछ । यसले रगत वृद्घि गर्नुका साथै सफासमेत गर्छ । रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गरेर मुटुको रोग हटाउनसमेत चना सहयोगी मानिन्छ ।
बालबालिकालाई महँगो बदामको सट्टा कालो चना खुवाउनाले उनीहरू स्वस्थ हुन्छन् ।
तरकारी र दालका रुपमा मात्रै नभइ यस्ता तरिका छन् चना खानुका
चनालाई हामीले तरकारी बनाएर पनि खान सक्छौ भने यसको दाल पनि खान सकिन्छ । यसलाई हामीले भुटेर पनि खान सक्छौ । चना नेपाली खानपिनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यसमा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, क्लाल्सियम, आइरन र भिटामिनको राम्रो स्रोत हो । जसले हामीलाई स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छ । यी सबै विशेषताका कारण नै यसलाई गरिबको मेवा भनिन्छ ।
चनाको दाल खादाका फाईदा यस्तो छ
– चनाको दाल सेवन गर्नाले कब्जीयतको समस्या निर्मूल हुन्छ । यती मात्रै होइन जन्डिसका रोगीलाई पनि चनाको दालको सेवन धेरै फाइदाजनक हुन्छ ।
– चनाको दालले कोलेस्ट्रोललाई कम गरेर तौल कम गर्न धेरै मद्धत गर्छ । यो पाचन प्रणालीको लागि धेरै नै लाभदायक छ ।
– चनाको दाल जिंक, क्याल्सियम, प्रोटिन, फोलेट आदिले भरपुर हुन्छ जसले तपाईको शरिरलाई आवश्यक र जरुरी उर्जा प्रदान गर्छ । यसको अलावा यो पेटको समस्याको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
– चनाको दालले शरिरमा आइरनको कमीलाई पुरा गर्छ र हेमोग्लोबिनको स्तर बढाउन मद्धत गर्छ । यसमा अमिनो एसिड शरिरको कोषहरुलाई मजबुत गर्नमा मद्धत गर्छ ।
– डायबिटिज नियन्त्रणको लागी चनाको दालको सेवन धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ । यसले ग्लुकोजको अत्याधिक मात्रालाई सोस्नपनि धेरै नै मद्धत गर्छ । सौन्दर्य बढाउनको लागि चनाको दालको बेसन अनुहारमा लगाउनाले लाभदायक हुन्छ ।
जानौँ, भिजाएको चना खानुका ८ फाइदा
१. स्वस्थ मुटु
चनाले कालेस्ट्रोललाई नियन्त्रणमा राख्छ । जसले गर्दा मुटु स्वस्थ रहन्छ र मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा पनि कम रहन्छ । चनाको नियमित सेवनले मुटुको धमनीहरुलाई खुलाउन र रगतको मात्रालाई बढाउनमा पनि मद्दत गर्छ । चनामा पाइने अल्फा लिनोलनिक एसिड र ओमेगा ३ आपसमा मिलेर कोरिनरी मुटु सम्बन्धी रोग र कार्डियो भास्कुर सम्बन्धी खतरालाई कम गर्छ ।
२. कब्जीयतमा राहत
भिजाएको चनामा पर्याप्त मात्रामा फाइबर हुन्छ । यसले पेटलाई सफा राख्नुका साथै पाचन तन्त्रलाई पनि राम्रो बनाउँछ ।
३. पिसाबको समस्या
भिजाएको चनामा गुड़ मिसाएर खानाले पटक–पटक पिसाब लाग्ने समस्यामा राहत हुन्छ । भिजाएको चना खानाले पाइल्सको समस्यामा पनि आराम दिलाउँछ ।
४. स्वस्थ छाला
५. तौल बढाउँछ
यदि तपाई चाहिने भन्दा बढी दुब्लो हुनुहुन्छ भने भिजाएको चना खानुस् । चनाले शरिरको तौल बढाउने काम पनि गर्छ । नियमित चना खानाले तौल बढ्नुका साथै मांसपेशी पनि बलियो बनाउँछ ।
६. सर्दीमा राहत
चनाले शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमतालाई बढाउँछ । जसले रुघाखोकी, सर्दी जस्ता समस्यामा राहत दिलाउँने काम पनि गर्छ ।
७. रगतको मात्रा पुरा
चना फलामको धेरै नै राम्रो स्रोत हो । यसले शरीरमा रगतको कमी छ भने त्यसलाई हटाउँछ । साथै रगतलाई सफा पनि गर्ने काम गर्छ ।
दैनिक भुटेको चना खाँदा शरिरलाई विभिन्न प्रकारका फाइदा हुन्छ
१. मोटोपना घटाउँछ चना
यदि तपाईं मोटोपनाका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ भने भुटेको चना तपाईंका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । भुटेको चनामा क्यालोरीको मात्रा निकै कम हुन्छ जबकी यसमा विभिन्न पौष्टिक तत्व जस्तै पोटासियम, क्याल्सियम, आइरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, डाइट्री फाइबर भरपुर मात्रामा हुन्छ । सय ग्राम भुटेको चनामा १ सय ६४ क्यालोरी हुन्छ । यदि तपाईं खाजामा भुटेको चना खानुहुन्छ भने तपाईंको तौल निकै चाँडै घट्छ ।
२. चनाले रगत बढाउँछ
चनामा आइरनको भरपुर मात्रा हुन्छ । त्यसकारण यदि तपाईंलाई रक्तअल्पत्ताको समस्या छ भने दैनिक भुटेको चना खान सुरु गर्नुहोस् । ध्यान दिनुहोस्, बोक्रा नभएको चनामा बोक्रा भएजत्तिको फाइदा हुँदैन । रक्तअल्पत्ताको शिकार धेरैजसो महिला हुने भएकाले यसले महिलालाई निकै फाइदा गर्छ ।
३. दिनभरी क्रियाशील रहनुहुनेछ
४. डाइट्री फाइबरले भरिपूर्ण
गलबन्दी चोरिको चर्चा बारे दिल निशानी मगरको कडा प्रतिक्रिया / हेर्नुहोस।
जब नारायणी पुल नजिक पुग्दा यी युवतीले दाईसँगै स्कुटरमा बसेर यस्तो गरिन, थाहाँ पाउँने सबैको होस उड्यो
पुरुषले महिला देख्नासाथ सबैभन्दा पहिल कुन ३ वटा शरीरको अंग बढी हेर्छ ?
केटी केटीको अनौठो प्रेम,मृत्युको मुखमै पुगेर पनि विहे
१३ बर्षिय नाताले भतिजी पर्ने बालिकालाई बारम्बार बलात्कार गर्ने व्यक्ति पक्राऊ ।Q
Prevगलबन्दी पछि शान्ति श्री परियारको अर्को मनछुने गीत आमा (भिडियो
Nextके तपाईँ मुखमा घाउ आएर चिन्तित हुनु हुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी टिप्स
कान रोग के हो ? कानबाट किन पिप आउछ ? यसबाट बाँच्ने उपाय यस्तो छ
काठमाडौको एउटा कोठामा हेर्नुहोस.. कसैलाई नपरोस् यस्तो ! (भिडियाे)
दुःखद खबर : बझाङमा जीप दुर्घटना, ९ को मृत्यु ४ जना गम्भिर घाईते ।
काठमाण्डौमा जन्मेर यहीँ हुर्केकी ऋचा धमलालाई सानोमा कसैले ठूलो भएपछि के बन्छौ भनेर सोध्दा भन्नुहुन्थ्यो ‘शिक्षिका बन्छु ।’ केही समयपछि ऋचालाई लाग्थ्यो शिक्षिका हैन, डाक्टर बन्छु । त्यसपछिको उहाँको सपना थियो ठूलो भएपछि वकिल बन्ने । तर उहाँले रोज्नुभयो ‘धोबी’ अर्थात लुगा धुने काम । शिक्षिका, डाक्टर र वकिल पेशालाई आफ्नो सपना मान्ने ऋचाका वर्षहरु फेरिएसँगै लक्ष्यहरु पनि फेरिंदै गए । अस्ट्रेलियामा चार वर्षे बीएससी नर्सिङ गरेर नेपाल फर्किएकी ऋचाको हिजोआज लुगा धुने काम नै सपना र बिपना भएको छ । धेरै युवाको सपना हिजोआज अस्ट्रेलिया र अमेरिका हुन्छ । त्यही ठाउँ जानका लागि मरिहत्ते गर्छन् ।तर त्यही देशमा पुगेर ‘स्कोप’ पनि राम्रो भएको विषय बीएससी नर्सिङ गरेकी ऋचाको मन अडिएन । पढाइअनुसारकै काम अस्ट्रेलियामै बसेर गरेको भए कमाइ राम्रो हुन्थ्यो । जिन्दगीले अर्कै लय समातिसकेको हुन्थ्यो होला । तर सुख र खुशी त मान्छेको भोगाइमा भर पर्छ ।ऋचा भन्नुहुन्छ, ‘सबैलाई परदेशको खुसीले नलोभ्याउने रहेछ, म खुशी भन्दा पनि आत्मसन्तुष्टि खोज्नका लागि फर्किएर आएको हुँ । र त ऋचा हिजोआज लुगा धुने काममा खोज्दै हुनुहुन्छ, खुशी र आत्मसन्तुष्टि सँगसँगै । धोबीले लुगा धोइदिन्छन् । लुगा धुने पुरानो काम र पुरानै पेशाको नयाँ रुप हो, नेपाली धोबी । र यसको जन्मदाता मध्येकी एक हुनुहुन्छ, ऋचा धमला । उहाँसँगै जोडिएका छन् झापाका निकुञ्ज भण्डारी र चितवनका विकास सुवेदी ।ऋचाले अस्ट्रेलियामा पढ्नुभयो ।यूकेमा आइटी पढ्नुभयो विकासले । निकुञ्ज भने काठमाण्डौमै पढ्दै हुनुहुन्थ्यो । दुईजना विदेशमा पढेर स्वदेशमा केही गर्ने संकल्प लिएर फर्किएका । अनि अर्का एकजनाको योजना पनि स्वदेशमै केही गर्ने । यी तीनको भेट एक पार्टीमा भयो । त्यही पार्टीमा भएको भेटले नै तीनैजनालाई एउटै कर्ममा जोडिदियो । ऋचा र विकास एकै स्वरमा भन्नुहुन्छ ‘हामी तीनै जनाको सोच मिल्यो ।’ सोच मिलेपछि सबै कुरा मिल्छ । र सम्बभ पनि छ । यही कुरा प्रमाणित गर्न लागिपरेका छन् यी तीन युवा ।तीनैजनालाई चिन्ने एक साथीले बोलाएको पार्टीमा भेटिएका ऋचा, विकास र निकुञ्जको सोच र सपना एकै थियो । त्यो पहिलो भेटपछि उनीहरु फेसबुकमा साथी बने । आफ्ना योजना र सपनाका कुरा फेसबुक म्यासेजमार्फत नै साटासाट गरे । मित्रता फेसबुक म्यासेजमा मात्र सीमित भएन । उनीहरु कफी गफ गर्न थाले । ‘हामी कफी पिउन पायक पर्ने ठाउँको क्याफेमा भेट्थ्यौं। एक दिन कफी पिउन बसेकै बेला मैले साडी धुन ड्राइक्लिन नभेटेको कुरा सुनाएँ,’ ऋचा सुनाउनुहुन्छ, ‘मैले जस्तै काठमाण्डौमा पानीको कारण समस्या भोग्नुभएको हरेछ, निकुञ्जले पनि, अनि लण्ड्रीकै काम गर्ने भनेर हामीले सोच्यौं ।’पानीको समस्या तीनैजनाले भोगेका थिए । तर आफूले भोगेको समस्या काठमाण्डौमा अरुले भोगेका छन् कि छैनन् त ? जान्नका लागि उनीहरुले अध्ययन गरे झण्डै ६ महिना हामीले काठमाण्डौका विभिन्न ठाउँमा गयौं, तीनजना फरक फरक ठाउँमा जन्थ्यौं, बेलुका फर्किएपछि दिनभरीका कुरा कफीबाटै साट्थ्यौं,’ ऋचा सुनाउनुहुन्छ । ६ महिनाको अध्ययनले काठमाण्डौमा लण्ड्री व्यवसायमा ठूलो सम्भावना भएको देखायो । तर पुरानै तरिका चल्नेवाला थिएन । तीनैजनाले पटक पटक व्यवसाय गर्ने तरिकाका विषयमा छलफल गरे । आफन्त र साथीभाइसँग पनि सल्लाह गरे । योजना थियो ‘अन लाइन लण्ड्री’ खोल्ने । तर उनीहरुको योजनालाई धेरैले हाँसोमा उडाए । कतिले विश्वास नै गरेनन् त कतिले नेपालमा अनलाइन बिजनेशको सम्भावना शून्य रहेको भन्दै काम अघि नबढाउन सुझाव दिए । तर ऋचासहित तीनै जनाले हिम्मत हारेनन् । ‘हामी लाई सकारात्मक सुझाव दिने थोरै थिए। तर तिनै थोरै व्यक्तिको साथ र सहयोगले नै हामीले आफूहरुको योजनालाई सफल पार्न सक्यौं,’ ऋचा मुस्कुराउदै भन्नुहुन्छ, ‘यो काममा दुःख देखेका थियौं तर असम्भव भने देखेका थिएनौं, त्यसैले सम्भावनालाई छाडेनौं ।’छोराछोरीले पढाइअनुसारकै काम गरुन् भन्ने अपेक्षा सबै आमाबुवाको हुन्छ । त्यो अपेक्षाबाट तीनैजनाका बुवाआमा अछुतो हुने कुरै भएन । पढाइ एकातिर काम अर्कोतिर । त्यसमाथि पनि लुगा धुने काम ।ऋचालाई लाग्थ्यो काम जे होस् मनदेखि गर्न पर्छ । व्यवसायिक योजनाका बारेमा सुनाउँदा आएको प्रतिक्रियालाई सम्झँदा उहाँलाई अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । फरक फरक प्रतिक्रियाहरु आइरहेकै थियो । उनीहरुको व्यवसायिक योजना पनि अघि बढिरहेको थियो । कफी पिउँदै योजना बुन्दै थिए, तीनैजना ।लुगा कति रुपैयाँमा धोइदिने त भन्ने कुरा भइरहेको थियो । त्यसदिन उनीहरुले क्यापचिनो कफी पिउँदै थिए। मूल्य थियो १२० रुपैयाँ ।निकुञ्जले भने ‘हामी लुगा १२० रुपैयाँ किलो नै धोइदिउँँ,’ निकुज्जको कुरा ऋचा र विकासलाई पनि मन प¥यो । उनीहरुले सोचे, ‘एउटा कफीको भाउमा हामीले लुगा धोइदिँदा दुवै पक्षलाई घाटा पर्दैन ।’ तीनैजनाले पाँच पाँच लाख रुपैयाँ लगानी गरे । र गएको वर्ष २०७४ सालको चैत महिनादेखि सुरुवात सुरु गरे ‘नेपाली धोबी’ नाम दिएर लुगा धुने काम । पढाइअनुसारकै काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ऋचा र विकासलाई । जे काम गरे पनि राम्रो गर्न पर्छ । आफ्नो इच्छा अनुसारको गर्नु पर्छ । लुगा धुने काम उनीहरुको इच्छाको काम थियो । काठमाण्डौ गैरीधारामा राखे नेपाली धोबीको कार्यालय । अनि शहरका पोल पोलमा टाँसे नेपाली धोबीले लुगा धोइदिने खबर । पर्चामा लेखिएको थियो, ‘शनिबारको दिन लुगा धुने कि छोराछोरी घुमाउन लाने, लुगा धुने कि फिल्म हेर्न जाने, साथी नभेटेको पनि धेरै भयो, लुगा धोएरै जाने भयो दिन ।’ अनि लेखिएको थियो – लुगा धोइ दिनेको नम्बर । त्यही नम्बरमा फोन गरेका थिए बालुवाटरका ग्राहकले । ऋचा र विकास आफैं पुगे लुगा लिन ।‘उहाँलाई श्रीमानले तिम्रो समस्या समाधान गरिदिने यता रहेछन् भनेर त्यही पोलमा टाँसिएको पर्चा लगेर दिनुभएको रहेछ’ ऋचा सम्झनुहुन्छ, ‘लुगा लिन गएका हामी लाई चिया खुवाउनुभयो, हाम्रो कामको तारिफ गर्नुभयो । गाह्रकबाट मिलेको मायासँगै लुगा लिएर फर्किए दुवैजना । ‘उहाँहरुले हाम्रो कामलाई गरेको सम्मानले हामी यस्तो खुशी भयौं नि,’ विकास ऋचाको कुरामा थप्नुहुन्छ, ‘हामी त मनमनै नाचेका थियौं ।’प हिलो दिन नै ग्राहकले आफ्नो कामलाई गरेको सम्मानले उनीहरुलाई थप हौसला मिल्यो । दुवैलाई लाग्यो – ‘राम्रो कामको थालनी गरेछौं ।’ दिदी अस्ट्रेलियामा नर्स भएकाले दिदीकै बाटो समात्न अस्ट्रेलिया पुग्नुभएको थियो ऋचा पनि । पढ्नका लागि उहाँले पाएको त्यो अवसर सबैका लागि खुशीको कुरा थियो । वकिल बन्ने सपना छाडेर नर्सिङ पढ्न पुगेकी ऋचालाई अष्ट्रेलियामा उभिएर काम गर्नुपर्दा लाग्थ्यो – ‘म यो काम गर्न सक्दिनँ ।’दिदीलाई भन्नुहुन्थ्यो, ‘म यसरी यहाँ बस्न सक्दिनँ, पढाइ सकिएपछि नेपाल फर्किन्छु ।’‘यहाँ जस्तो आरामले कहाँ काम गर्न पाइन्छ र, गाह्रो भयो भने बस्न पाइन्छ, साथीभाइले सघाउँछन्, तर त्यहाँ त त्यस्तो हुँदैन’ अस्टे लियामा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै ऋचा भन्नुहुन्छ, ‘कति दिन त मैले रुँदै काम गरेको थिएँ ।’ ऋचाले विदेशको कामको बारेमा सुनाइरहँदा नमिठो मान्दै विकासले थप्नुभयो, ‘म त यूकेको एक राम्रो आइटी कम्पनीमा काम गर्थें, तर म त्यहाँ एक्लो थिएँ ।’परदेशले एक्लो बनायो । संघर्ष गर्न सिकायो । त्यही संघर्ष र एक्लोपनाले नै विकासलाई नेपाल नै फर्का यो । ऋचाको पनि दिदी थिइन् । पढाइ सकेपछि कमाउने मेसो मिल्दै थियो । तर ऋचालाई यी सबै कुराले छोएन । पढाइ सकिएपछि अठोट गर्नुभयो, ‘जे हुन्छ होस् नेपाल नै फर्किन्छु ।’दुवै भन्छन्,‘हामीलाई नेपाली धोबीले पर्खिरहेको थियो ।’यही चैतमा नेपा ली धोबी एक वर्ष लाग्यो । एक वर्षको उमेर नेपाली धोबीले लामो पाइला चालिसक्यो । यो एक वर्षमा नेपाली धोबीले सुरुवाती चरणको अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गरेको छ । आँट र केही गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति हुने हो भने केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । गैरीधारा बाट चक्रपथ भित्र मात्रै सेवा दिँदै आएको नेपाली धोबीको अहिले ललितपुरको कुपण्डोलमा पनि शाखा विस्तार भएको छ ।‘पुरानो कामलाई पनि नयाँ तरिकाले गर्दा हुने रहेछ,तर आफूले गर्ने काम र त्यसको बजारकाबारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ,’ ऋचा भन्नु हुन्छ । नेपाली धोबीलाई एक वर्षमा मिलेको सफलता पनि त्यसकै परिणाम हो । ऋचा, विकास र निकुञ्जले पुरानो कामलाई नयाँ रुपमा गर्नका लागि अध्ययन मात्र गर्नु भएन । तालिम पनि लिनुभयो । विदेशमा लण्ड्री म्यानेजरका रुपमा काम गर्ने व्यक्तिले नै दिएका थिए तालिम । ‘काम गर्छु भनेर आँटेर मात्र पनि हुँदैन, कममा आफू भिज्न प र्छ, त्यसलाई बुझ्न पर्छ, विकास भन्नुहुन्छ, ‘यो काम गर्ने भनेपछि हामी तीनैजनाले तालिम लियौं, त्यो पर्याप्त छैन, हामी सिकिरहेका छौं, दिनहुँ नयाँ नयाँ कुरा सिक्न पाइन्छ ।’उनीहरु दिनको सालाखाला ४० देखि ५० किलो लुगा धुन्छन् ।कहिलेकाहीँ सय किलो भन्दा माथि नै हुन्छ । होटल, अस्पताल र कम्पनीसँग पनि समन्वय गरेर उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । ९० प्रतिशत फोनमार्फत नै अर्डर आउँछ भने बाँकीले फेसबुक, इमेल लगायत माध्यमबाट अर्डर गर्दछन् । उनीहरुले ९ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । ‘९ जनालाई पाल्न र अफिस चला
तपाईको २०७६ असार ०३ गते मङ्गलबारको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस् ।
एक युवकको पेटबाट डाक्टरले निकाले नेलकटर, औंठी, सिक्का र साँचो सहित ५० वस्तु
जानकारी मुलक (482)
स्वास्थ्य/ जीबन शैली (254)